Ukraine waxay bilowday inay ka iibsato Baradho Poland - Nidaamka Baradhada
Sababta ugu weyn ee go'aankan, sida uu sheegay madaxweynaha ururka Yukreeniyaan ee Khudradda iyo Khudaarta (UPOA) Taras Bashtannik, waa qiimo hooseeya alaabta waddanka loo dhoofiyo. Waa in la ogaadaa in bilowga soo dejinta baradhada waqti ay xarumaha kaydinta baradhada ay ka buuxaan wax soo saarka maxalliga ah ay tahay calaamad aad u xun.
“Maanta waxaa jira wax soo saarayaal badan oo si aan tayo lahayn u beero baradhada. Intaa waxaa sii dheer, muddo labo sano ah hadda waxaan ka soo dejineynaa badeecadaha Ruushka iyo Belarus, sannadkanna, bilowgii xagaaga, waxaan bilownay inaan ka soo dhoofsanno baradhada Nederland, haddana waxaan horeyba uga keeneynaa Poland. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in Poland cunitaanka baradhada ee HoReCa iyo qeybaha wax soosaarka ay si weyn hoos ugu dhacday xirnaanshaha karantiil darteed. Sidaas awgeed, tiro badan oo baradho ah ayaa "cadaadis saaraya" sicirka, kuwaas oo ka hooseeya qiimaha, ayuu yiri Taras Bashtannik, isagoo dhaleeceeyay hadalada wakiilka aqlabiyadda baarlamaanka Ukraine in aan loo baahnayn taageerada gobolka ee baradhada Yukreeniyaan.
Tan oo baradho ah ayaa wali ku jirta beeraha Bulgaariya
Agrarians of Moldova waxaa laga codsanayaa inay si ku meel gaar ah u mamnuucaan soo dejinta baradhada
“Maanta baradhada ku taal Ukraine waxay ka qiimo badan tahay Poland. Intaa waxaa sii dheer, sida ku xusan macluumaadkeyga, maalmihii la soo dhaafay, tiro ka mid ah soo saarayaasha waaweyn ee Yukreeniyaan ayaa mar kale bilaabay inay kordhiyaan qiimaha iibka alaabada. Waxay ku sababeynayaan tan xaqiiqada ah in 2020 ay heleen dalag ka hooseeya kii 2019, iyo marka loo eego hoos u dhaca mugga alaabada suuqa, kororka qiimuhu waa macquul. Intaa waxaa dheer, hadda qiimaha jumlada ah ee baradhada ee Ukraine ayaa 40% ka hooseeya isla waqtigaas sanadkii la soo dhaafay, taas oo, aragtida beeraleyda baradhada, ay tahay cadaalad darro. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqda jirta ayaa ah inaanan ka fogaan karin wareeg kale oo la soo dhoofsho ah haddii soo saarayaasha maxalliga ah ay sare u qaadaan qiimaha, ”ayuu sharraxayaa Andriy Yarmak, dhaqaaleyahan ka tirsan Waaxda Maalgashiga ee Hay'adda Cunnada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay (FAO).
Dib-u-eegista toddobaadlaha ah ee suuqa baradhada ayaa muujineysa in qiimaha baradhada ee Ukraine ay horey uga sarreeyeen xitaa xitaa Georgia iyo Moldova. Magaca, Moldova wuxuu ahaa suuqa ugu weyn ee laga dhoofiyo baradhada Yukreeniyaan dhowr sano.
Tags: PolandUkraineqiimaha baradhada
Yukreeniyaan waxay ururin doontaa baradho iyo khudrad yar
Yukreeniyaan, waxay rabaan inay dhistaan ​​warshad soosaarka shiilan Faransiiska
Yukreeniyaan waxay halis ugu jirtaa inay waayaan soosaarkooda baradhada
Natiijooyinka nadaafadda waxaa lagu soo koobay gobolka Omsk